Condor Airlines dia manohy ny sidina mankany amin'ny Nosy Paradise of Seychelles
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Condor Airlines dia manohy ny sidina mankany amin'ny Nosy Paradise of Seychelles
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Condor Airlines niverina tany Seychelles
Ny fiaramanidina Boeing 767/300 an'ny Condor Airline dia niantsona tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Seychelles tamin'ny 0620 ny marainan'ny sabotsy 2 oktobra 2021, izay niarahaban'ny canon rano ny fiverenany any amin'ireo nosy paradisa.
Ny sidina voalohany nataon'i Condor tamin'ny nosy Seychelles dia nitondra mpandeha 164 tao anaty sambo.
Ny mpandeha tsirairay avy dia nahazo ny ampahany amin'ny creole mafana nampiarahina tamin'ny fahatsiarovana fahatsiarovana avy amin'ny Departemantan'ny fizahan-tany ary nampifaliana azy ireo tamin'ny mozika nentin-drazana.
Ny tsena alemana dia iray amin'ireo tsena loharanom-pahalalana tsara indrindra ho an'i Seychelles.
Manohy ny sidina tsy miato avy any Frankfurt, sidina voalohany an'ny Condor amin'ny vanim-potoana mankany Seychelles nitondra mpandeha 164 izay nahazo ampahan'ny creole mafana nampiarahina tamin'ny fahatsiarovana fahatsiarovana avy amin'ny Departemantan'ny fizahan-tany ary nankalazana mozika nentin-drazana mivantana.
Nanatrika ny fahatongavan'ny fiaramanidina ary niarahaba ireo mpandeha 164 rehefa nidina izy ireo, ny Tale Jeneralin'ny fizahan-tany ho an'ny fizahan-tany, Ramatoa Bernadette Willemin, dia nanambara fa amin'ny fiverenan'ny serivisy dia miditra amin'ny seranam-piaramanidina hafa izay mandray anjara amin'ny fanarenana ny indostrian'ny fizahantany sy ny toekaren'ireo nosy.
“Miaraka amin'ny famerenan'ny serivisy azy ireo dia miditra amin'ny seranam-piaramanidina 12 hafa i Condor. Tena mahafaly antsika tokoa ny mahita mpiara-miombon'antoka fiaramanidina iray hafa miverina amoron-tsiraka. Ny sidina mivantana avy amin'ny tanàna eropeana dia sanda fanampiny fanampiny ho an'ny toerana haleha. Ity dia a dingana lehibe amin'ny fanarenana antsika indrindra fa ny tsena alemana dia iray amin'ireo tsena loharanom-pahalalana tsara indrindra ho an'i Seychelles. Ny famerenana ny sidina dia tonga amin'ny fotoana mety ary koa ny governemanta alemanina dia manalefaka ny fepetra takiana amin'ny zotram-pirenena sy ny mponina mandeha any Seychelles, "hoy Ramatoa Willemin.
Andriamatoa Ralf Teckentrup, Lehiben'ny Executive Executive ao Condor, naneho ny fahatokisany ny toerana halehany dia nilaza fa, "Ny Seychelles any amin'ny Ranomasimbe Indianina dia an'ny fandaharam-pialan'ny Condor ary toerana iray malaza amin'ireo vahininay. Faly erak'izao tontolo izao miaraka amoron-dranomasina tsy manam-paharoa, haran-dranomasina ary ala mando ary manantena fatratra ny hampidina ny vahininay izahay amin'ny fialantsasatra aorian'ny fotoana lava be dia be. Niara-niasa tamim-pahombiazana tamin'ny Seychelles momba ny fizahan-tany izahay nandritra ny fotoana ela mba hahafahan'ny mpitsidika mankafy ny fialantsasatra nofinofisin'izy ireo. "
Ny fizahan-tany Seychelles dia hiara-hiasa amin'ny kaompaniam-pitaterana, mpiara-miombon'antoka amin'ny indostrian'ny fizahan-tany, ny haino aman-jery ary koa ny fanamafisana ny fampielezan-kevitr'ireo mpanjifa mba hamerenany ireo mpitsidika avy amin'ny tsenany loharano lehibe. “Ny ezaka ataontsika izao dia mifantoka amin'ny famerenana ireo mpitsidika anay avy any Alemana sy ireo firenena mifanila aminy. Miaraka amin'ny fahatongavan'i Condor dia manantena fatratra ny fisondrotan'ny isan'ny mpitsidika izahay, "hoy Ramatoa Willemin.
Alemana no tsena loharano mitarika an'i Seychelles tamin'ny taona 2019, raha nahatratra 72,509 ny fahatongavan'ireo mpitsidika avy tany Alemana, efa ho ny ampahefatry ny dia nandeha tao Condor. 8,080 2021 ny mpitsidika nitsidika an'i Seychelles tao anatin'ny sivy volana voalohany tamin'ny XNUMX.